Bare-handed surgeries as Zimbabwe’s health system collapses -->
(1 of ) In this Jan. 9, 2019, photo, a family collects the body of their son who died at Parirenyatwa Hospital in Harare, Zimbabwe. The family who blamed the death of their son on the doctors strike said they were devastated. A doctors strike in Zimbabwe has crippled a health system that was already in intensive care from neglect. It mirrors the state of affairs in a country that was full of promise a year ago with the departure of longtime leader Robert Mugabe but now faces economic collapse.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
(2 of ) In this Jan. 9, 2019, photo, a woman walks past the mortuary entrance where a family collected the body of their son who died at Parirenyatwa Hospital in Harare, Zimbabwe. The family who blamed the death of their son on the doctors strike said they were devastated. A doctors strike in Zimbabwe has crippled a health system that was already in intensive care from neglect.It mirrors the state of affairs in a country that was full of promise a year ago with the departure of longtime leader Robert Mugabe but now faces economic collapse.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
(3 of ) In this Jan. 9, 2019, photo, an elderly woman slowly makes her way to Parirenyatwa Hospital in Harare, Zimbabwe, with the hope of being treated and receiving medication. A doctors strike in Zimbabwe has crippled a health system that was already in intensive care from neglect. It mirrors the state of affairs in a country that was full of promise a year ago with the departure of longtime leader Robert Mugabe but now faces economic collapse.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
(4 of ) In this Jan. 9, 2019, photo, a man lies on a bench outside a government hospital after being turned away during the doctors strike at Parirenyatwa Hospital, in Harare, Zimbabwe. A doctors strike in Zimbabwe has crippled a health system that was already in intensive care from neglect. It mirrors the state of affairs in a country that was full of promise a year ago with the departure of longtime leader Robert Mugabe but now faces economic collapse.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
(5 of ) In this Jan. 9, 2019, photo, Samson Chirau and his wife Susan ponder their next move after the husband could not be attended to at Parirenyatwa Hospital due to the doctors strike in Harare, Zimbabwe. A doctors strike in Zimbabwe has crippled a health system that was already in intensive care from neglect. It mirrors the state of affairs in a country that was full of promise a year ago with the departure of longtime leader Robert Mugabe but now faces economic collapse.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
(6 of ) In this Jan. 9, 2019, photo, a family collects the body of their son who died at Parirenyatwa Hospital in Harare, Zimbabwe. The family who blamed the death of their son on the doctors strike said they were devastated. A doctors strike in Zimbabwe has crippled a health system that was already in intensive care from neglect. It mirrors the state of affairs in a country that was full of promise a year ago with the departure of longtime leader Robert Mugabe but now faces economic collapse.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
(7 of ) In this Jan. 9, 2019, photo, a woman walks past the mortuary entrance where a family collected the body of their son who died at Parirenyatwa Hospital in Harare, Zimbabwe. The family who blamed the death of their son on the doctors strike said they were devastated. A doctors strike in Zimbabwe has crippled a health system that was already in intensive care from neglect.It mirrors the state of affairs in a country that was full of promise a year ago with the departure of longtime leader Robert Mugabe but now faces economic collapse.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
(8 of ) In this Jan. 9, 2019, photo, an elderly woman slowly makes her way to Parirenyatwa Hospital in Harare, Zimbabwe, with the hope of being treated and receiving medication. A doctors strike in Zimbabwe has crippled a health system that was already in intensive care from neglect. It mirrors the state of affairs in a country that was full of promise a year ago with the departure of longtime leader Robert Mugabe but now faces economic collapse.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
(9 of ) In this Jan. 9, 2019, photo, a man lies on a bench outside a government hospital after being turned away during the doctors strike at Parirenyatwa Hospital, in Harare, Zimbabwe. A doctors strike in Zimbabwe has crippled a health system that was already in intensive care from neglect. It mirrors the state of affairs in a country that was full of promise a year ago with the departure of longtime leader Robert Mugabe but now faces economic collapse.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
(10 of ) In this Jan. 9, 2019, photo, Samson Chirau and his wife Susan ponder their next move after the husband could not be attended to at Parirenyatwa Hospital due to the doctors strike in Harare, Zimbabwe. A doctors strike in Zimbabwe has crippled a health system that was already in intensive care from neglect. It mirrors the state of affairs in a country that was full of promise a year ago with the departure of longtime leader Robert Mugabe but now faces economic collapse.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)